August 2012 ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကို စွပ်စွဲချက်အဆိုအား ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၃ဦး၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် အတည်ဖြစ်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံးရုံးကို စွပ်စွဲချက်အဆိုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက သြဂုတ်လ၂၉ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ''အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသ၀ဏ်လွှာမှာ ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ မိမိထံ ပေးပို့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာက နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား စွဲချက်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၃၄ ပုဒ်မခွဲ(က) ပုဒ်မခွဲ ၂ အရ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ပုဒ်မခွဲငယ် ၅ အရ ဥပဒေအရ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ယင်းတို့အား စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့် အရေးကြီးအဆိုကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၂ ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၃ ရက်နေ့မြောက်တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၂ ဦးကိုယ်စား အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မြင့်ဖေက အရေးကြီးအဆိုအဖြစ် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အရေးကြီးအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူရာ၌ ရှိရင်းစွဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၃ ဦးအနက် သုံးပုံ နှစ်ပုံကျော်ဖြစ်သော ၁၆၃ ဦးက နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့်အဆိုကို ထောက်ခံဆန္ဒပြုခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၀ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ အဆို သည် အတည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ စွပ်စွဲချက်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်''ဟု သ၀ဏ်လွှာတွင်ပါရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သ၀ဏ်လွှာနှင့်တကွ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၂ ဦး၏ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုချက်များကို အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပူးတွဲပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက်သ၀ဏ်လွှာအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ် တော်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ''အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၁၊ ပုဒ်မ ၃၃၄ တို့အရ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၇၁ နှင့် ၃၃၄ တို့အရ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့တွင် ဦးနန္ဒကျော်စွာ (ဥက္ကဋ္ဌ)နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတီခွန်မြတ်၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဒေါက်တာစိုးရင်၊ ဦးသောင်း၊ ဦးဝင်းထိန်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒေါ်ဒွဲဘူ၊ ဦးမောင်ဦး၊ ဒေါ်နန်းဝါနု၊ ဦးဘရှိန်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း၊ ဒေါ်နန်းစေအွာ၊ ဒေါ်တင်နွယ်ဦး၊ ဦးစိုးဝင်းတို့ ပါဝင်ကြသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ရက်ပိုင်းအတွင်း ခေါ်ယူစစ်ဆေး ကြားနာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Copy From The Eleven Media Group
Tags: သတင်း, ကြေငြာချက်, နိုင်ငံရေး
နိုင်ငံတော်၊ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်နှင့် သားရွှေအိုး ထမ်းခြင်း
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ သုံးရပ်ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပပြီးနောက် တသီးတခြားစီ ပိုင်းခြား ကျင့်သုံးခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် တစ်နှစ်နှင့် ခြောက်လ နီးပါး ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အကောင်အထ
် ဖော်ရန် အရပ်သား အစိုးရ အသွင်ပြောင်းကာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သော တစ်နှစ်ခွဲခန့် ကာလကို ပြန်ကြည့်ပါက ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်တို့ အနေနှင့် များစွာသော အပြုသဘောဆောင် အပြောင်းအလဲများ အချိန်တိုအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။
ထိုသို့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့သည့် အတွက်လည်း နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာပြည်သူ လူထု တစ်ရပ်လုံးက သောင်းသောင်းဖြဖြ အားပေး ထောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
ဥပဒေပြု လွှတ်တော်များတွင် ပြည်သူလူထု ကိုယ်စား တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ ပါဝင်သည့် လွှတ်တော် အရပ်ရပ်၏ ကြိုးစား အားထုတ်မှု ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ခရီးလမ်း အစအတွက် အရေးကြီးသော ဥပဒေများ အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို တာဝန်ယူ ထားသည့် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ သည်လည်း နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ အချိန်တိုအတွင်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တရားစီရင်ရေး အနေနှင့်မူ ပြည်ထောင်စု အဆင့်မှသည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်အဆင့် အထိတိုင် သီးခြားမဏ္ဍိုင် တစ်ခု အနေနှင့် ဥပဒေနှင့် အညီ လွတ်လပ်စွာ စီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုး သိသိသာသာ မြင်တွေ့ရခြင်း မရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံး တရားရုံးဟု တစ်နည်းအားဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံး အနေနှင့်မူ သမိုင်းဝင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ် ချမှတ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းမှာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ ရှိ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ၀န်ကြီးများကို ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ လေ့လာ သုံးသပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးအဆင့်အဖြစ် မသတ်မှတ်ခြင်း ကိစ္စအပေါ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံးက အခြေခံ ဥပဒေ အကိုးအကားဖြင့် ယင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးများကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီး အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးအဆင့် အဆောင်အယောင်နှင့် ခံစားခွင့်များ ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ် ပေးခဲ့ပါသည်။
ဖော်ပြပါ အပြောင်းအလဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ သုံးရပ်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ အကျိုး တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ထောက်ကူ ပံ့ပိုးပေးသော သမိုင်းဝင် အကျိုးဆောင်မှု များဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ပြောင်း ကာလတွင် အာဏာသုံးရပ် အကြား အပြန်အလှန် ထိန်းညှိကြသည့်အခါ လူသားများ ဖြစ်ကြသည့်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ အချေအတင် ဖြစ်မှုများ၊ နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းများ၊ တင်းမာမှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုများ ရှိတတ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အာဏာရှင် စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းသော နိုင်ငံများ အားလုံး အဆိုပါအခြေအနေ များနှင့် အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ကြုံခဲ့ရသည်ချည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ အပြန်အလှန် ထိန်းညှိကြသည့်အခါ အာဏာတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား နားလည်မှု မလွဲစေရေး၊ ခံစားချက်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများ မရောယှက် မိစေရေးမှာ အထူးအရေးကြီးလှပါသည်။
ထို့အတူ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအပေါ် အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူမှု၊ ကောက်ချက်ချ ပုံဖော် ဆုံးဖြတ်မှုတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာ တစ်ခုချင်း စီအလိုက် တစ်ခါတစ်ရံ ကွဲလွဲမှု ရှိတတ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းများအတွင်း အာဏာသုံးရပ် အကြား နားလည်မှု လွဲစရာ အရေးကိစ္စကြီး တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ပါသည်။ ယင်းမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကိုယ်စား ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ တင်ပြ လျှောက်ထားချက် အရ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာခုံရုံးသည် လွှတ်တော်များက ဖွဲ့စည်းသည့် ရေးရာ ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အကိုးအကား ပြုကာ ပြည်ထောင်စု အဆင့်မဟုတ်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို မူတည်ကာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကခုံရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်း ပေးရန်၊ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ မိမိ သဘောဆန္ဒ အလျောက် နုတ်ထွက် ပေးရန်သမ္မတထံ သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခြင်း၊ ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များအား စွပ်စွဲ ပြစ်တင်ရန် စီစဉ်ခြင်း၊ ခုံရုံးအဖွဲ့က အခြေခံဥပဒေ အတိုင်းသာ စီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတက စွပ်စွဲ ပြစ်တင်ခြင်းအစား အခြေခံဥပဒေပါ ထိုအချက်နှင့် ဆိုင်သော ဥပဒေပုဒ်မကို ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသာ ရွေးချယ်ရန် လွှတ်တော်ထံ မေတ္တာရပ်ခံ အကြောင်းပြန်စာပေးပို့ခြင်းတို့ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းများအရ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းကြောင်း ကြေညာရန် အဆိုကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းရာ လွှတ်တော်အမတ် ၆၂၂ ဦးရှိသည့်အနက် ထောက်ခံမဲ ၄၅၂မဲဖြင့် လက်ခံ ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ဖော်ပြပါ အခြေအနေများသည် အခေါ်အဝေါ်၊ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုကို အကြောင်းပြုကာ ဥပဒေ ပြုလွှတ်တော်၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတို့အကြား အခြေခံဥပဒေနှင့် လွှတ်တော် ဥပဒေများ အပေါ် အခြေခံ၍ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူမှု ကွဲလွဲနေကြခြင်း တစ်နည်းအားဖြင့် အချေအတင် ဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် များစွာ သတိထားရမည့် အချက်မှာ သာမန်အားဖြင့် အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူမှု ကွဲလွဲမှု တစ်ခုထက် ခံစားချက်ပါသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်၊ အဖွဲ့အစည်း အသင်းအပင်း စိတ် ရောယှက် မသွားမိစေရေး ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အရေးအကြီးဆုံး မဏ္ဍိုင်ကြီးများ အနေနှင့် လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရသော အကျပ်အတည်းကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ အကျိုး အလို့ငှာ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများ အကျိုးအတွက် ကျန်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း မဏ္ဍိုင် အသီးသီး၏ သမိုင်းဝင် ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထောက်ချင့်ကာ သူမနိုင်၊ ငါမရှုံး၊ သူနိုင်၊ ငါနိုင် သားရွှေအိုး ထမ်းလာသည့် ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းကြ ပါမည့် အကြောင်း အလေးအနက် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
Copy From The Voice Weekly
သုံးရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စု အဆင့် ရာထူး (၃၀) အပြောင်းအလဲ ဖြစ်
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး သြဂုတ် ၂၇ ၊၂၈ ၊၂၉၊ ရက်နေ့များတွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ အရ ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် အပါအဝင် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ရာထူးနေရာ ၃၀ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက် များအရ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ( ၉ ) ဦးကို နေရာပြောင်းရွှေ့  ခန့်ထားခဲ့ပြီး
်ကြီး ( ၁၅ ) ဦးကို အသစ် ခန့်ထားခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် တွင်မူ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် တကွ ဝန်ကြီး ( ၂ ) ဦးအား ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
ထူးခြားချက် အနေဖြင့် နေရာ ပြောင်းရွှေ့ ခံခဲ့သော ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများတွင် လေးဦးမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးတွင် ခန့်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခင် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကိုလည်း သမဝါယမ ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့  ခန့်အပ်ခဲ့သည်ကို ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထို့အပြင် ဒုတိယ ဝန်ကြီး ၁၅ နေရာ အသစ်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် လည်း အမျိုးသမီး (၄)ဦး ထပ်မံပါဝင်ခဲ့ရာ အစိုးရ အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး( ၆ ) ဦး အထိ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်အရ မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်းအထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်း၊ အငြိမ်းစားဗိုလ်မှုးချုပ်ဇင်ယော်နှင့် သံအမတ်ကြီးဦးသန့်ကျော်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်း အသီးသီးခန့်အပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ကို ကလေး အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သည့် အဖွဲ့အစည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ဂီမွန်း၏ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော ကလေး အခွင့်အရေး ဆိုးရွားစွာ ချိုးဖောက်သည့် အဖွဲ့အစည်း စာရင်းမှ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ပယ်ဖျက်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ယူနီဆက်(မြန်မာ)၏ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာရာမက်(ရှ်)ရှရသာ က ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့် ကလေးစစ်သား ၄၂ ဦ
း ကို ကုလသမဂ္ဂ နှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး နှုတ်ထွက်ခွင့် ပေးသည့် အပေါ် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။
အလားတူပင် ၂၀၀၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ ကလေးစစ်သား ၆၀၀ ကျော်ကို စစ်မှုထမ်းမှ နှုတ်ထွက်စေခဲ့ပြီး မိဘနေရပ်ထံ ပြန်ပို့ ခဲ့ကြောင်း ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်ရှင်းက သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဒညင်းကုန်း စုဆောင်းရေး၌ ကျင်းပသော အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရသည် အရွယ်မရောက်သူ ကလေးငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၆၁၂ အတိုင်း လိုက်နာသော်လည်း အောက်ခြေရှိ တပ်သား စုဆောင်းသူများ အကြားတွင် အသိပညာ ၊အတတ်ပညာ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲ တွေ့ရှိနေရကြောင်း ယူနီဆက် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစ္စလာမ်တရားထိုင်သူများ ဌာနဆိုင်ရာအကူအညီဖြင့် နေရပ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် လုံခြုံရေးစိတ်မချရမှုကြောင့် ပြန်လာရန်ကြန့်ကြာခဲ့သော
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ မြေပုံမြို့နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တရားထိုင်သူများကို ဌာနဆိုင်ရာများအကူညီဖြင့် ယခုလ ၂၆ ရက်ကနေရပ်သို့ ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များကပြောသည်။
မြေပုံသင်္ဘောဆိပ်တွင် ရဲနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ကလိုက်လံပို့ေ
တစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေကြောင်းလည်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။ လုံခြုံရေး ရဲဝန်ထမ်း ခြောက်ဦးနှင့်အတူ မလိခ အမြန်ရေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ရားထိုင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးက “မြေပုံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သင်္ဘောဆိပ်အထိ ထော်လာဂျီငှားပေးပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ထို့ပြင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မြေပုံမြို့သို့ရောက်ရှိနေသော ကျောက်ဖြူမှ အခြားမွတ်စလင် ၁၅ ယောက်လည်းပါလာကြောင်း ကျောက်ဖြူဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပဋိပက္ခများမဖြစ်မီက ပေါက်တော၊ မင်းပြား စသည့်မြို့များမှ မြေပုံမြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီး နေရပ်ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသည့် အခြား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရှိနေပြီး ၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေပုံဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ ။
Copy From YPI
သားဖြစ်သူပြန်လာမည်ဆိုလို့သာ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ လာစောင့်နေရသည်။ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့ မလားဟူသော အတွေးက အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်မိခင်တစ်ယောက်ကို ဒွိဟပွားစေသည်။
အမိမြေကနေ သားဖြစ်သူ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မသွားခင် သူ့ဆီသို့ နောက်ဆုံး ကသုတ်ကရက် ရေးသားပေးပို့ခဲ့သော စာတိုလေးထဲမှာ “အမေ ကျွန်တော်မသေပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့။ အခြေအနေအရ နယ်စပ်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ တစ်ပတ် သို့မဟုတ် အလွန်ဆုံး နှစ်လလောက်ကြာမယ်”တဲ့။
ထို “အလွန်ဆုံးနှစ်လ” ဟူသော အချိန်ကာလသည် ကုန်လွန်သွားခဲ့သည်။ သားဖြစ်သူပြန်မလာ။ နှစ်နှစ်ကုန်သွားသည် ဘာသတင်းမှ မရ။ သေပဲသေသွားပြီလား။ နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ ကျော် ထပ်ကုန်သွားပြန်သည်။ သားတစ်ယောက် ပေါ်မလာနိုင်အား။
အခု သားဖြစ်သူပြန်လာမည်ဆိုသည့်အခါ ရင်ခုန်စွာနှင့်ပဲ အိပ်မက်မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ဆုတောင်းရင်း လေဆိပ်သို့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်းရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုနေ့က ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်။ သားဖြစ်သူလိုက်ပါ စီးနင်းလာသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ ပျံသန်းလာသော ထိုင်းလေကြောင်း TG-305 သည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ဆိုက်ရောက်လာသည်။
ခရီးသည်တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ထွက်လာကြသည်။ ထိုအထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွာခဲ့ရသော သားဖြစ် သူပါလေမည်လား လည်ပင်းတရှည်ရှည်နှင့် စောင့်နေရသည့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း တစ်ယောက်မှာ ရင်ဖိုလှိုက်မောနေသည်။ လေဆိပ်ထဲမှ ထွက်သည့်အခါ အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ ကြုံရမှာကိုလည်း တွေးပူနေမိသည်။
အဝေးကနေ လွမ်းဆွတ်ခဲ့ရသော အမေဖြစ်သူနှင့် ပြန်တွေ့ရတော့မည်ဆို သည့်အခါ သားဖြစ်သူမှာလည်း စိတ်တွေ တအားလှုပ်ရှားနေသည်။ လေယာဉ်က အဆင်း၊ ခရီးသွားအထောက်အထားတွေ အစစ်ဆေးခံ ပြီးထွက်အလာ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းများက ၀မ်းပန်းတသာ စွပ်ပေးကြသောပန်းကုံးတွေ၊ ကမ်းပေး ကြသော ပန်းစည်းတွေ ပိုက်လျက် အမေ ဖြစ်သူကိုရှာသည်။ ချက်ချင်းမတွေ့။ နေ မကောင်းလို့ လာမကြို နိုင်တာပဲလား။
သည်လိုနှင့်ပဲ လူအုပ်ကြီးနှင့် တအိအိ၊ တရွေ့ရွေ့ ထွက်လာလိုက်တာ တစ်နေရာမှာ မတ်တတ်ရပ်လို့ စောင့်လင့်နေသော အမေဖြစ်သူကို သွားတွေ့သည်။ မြင် မြင်ချင်း အမေဖြစ်သူကို ပြေးဖက်လိုက်သည်။ သားအမိနှစ်ယောက် တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားရင်းက ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်လာကြပြီး မျက်ရည်တွေသာ တွင်တွင်စီးကျလာကြသည်။ ထိုအခိုက်မှာ သားအမိနှစ်ယောက် စလုံးဆီမှ စကားတစ်ခွန်းမှထွက်မလာ။
အမေဖြစ်သူ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်းက ရင်ဖိုလှိုက်မောစွာဆိုသည်။
အမေဖြစ်သူ၏အသံမှာ သားဖြစ်သူ နှင့်တွေ့ဆုံပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာသည်အထိ သားနှင့်ပြန်တွေ့ရသည့် ထိုနေ့ကအကြောင်းကို ပြန်ပြောရတိုင်း ရင်တွေခုန်နေဆဲ။ အသံတွေ တုန်ခါနေဆဲ။
“ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်၊ သမ္မတ ကြီးကိုလေ။ ဒီတစ်သက် သားကြီးနဲ့ ပြန်ဆုံရလိမ့်မယ်လို့ကို မထင်တော့တာ”
ထိုအမေ၏ သားနာမည်က“ဦးအောင် မျိုးမင်း”။
သူက ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ) (Human Rights Education Institute of Burma - HREIB) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး။ ယနေ့တော့၂၄ နှစ်လုံးလုံးအမိမြေကိုလွမ်းပြီး မက်ခဲ့ရသည့်အိပ်မက် အမှန်တကယ် ဖြစ်လာပြီဟုဆိုကာ ဦးအောင်မျိုးမင်း တစ်ယောက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေမိ သည်။
ဦးအောင်မျိုးမင်းကား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ သည့် တစ်နှစ်ကာလအတွင်း ပြည်တော် ပြန်လာခဲ့ကြသူများထဲက တစ်ယောက်။
ရာစုနှစ်တစ်ဝက်နီးပါး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြေရှင်းရခက်သည့် နိုင်ငံရေးကျပ်တည်းမှုများ၊ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ကင်းမဲ့မှုများ၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုများကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဦးအောင်မျိုးမင်း အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသားပေါင်း မြောက်မြားစွာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။
၁၉၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီးချိန်နှင့် ၂၀၀၇ အရေးအခင်းပြီးချိန်တို့သည် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အ မြောက်အမြား ပြည်ပသို့ အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရသော နိုင်ငံရေးအရ မွန်းကျပ်သည့် ခေတ်ကာလများ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူများအနေနှင့် နိုင်ငံပြင်ပကနေ တိုင်းပြည်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး များ ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် အချိန်ပြည့်အရေးဆိုကြသူများရှိသလို တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးလုပ်သည့် အခါ လိုအပ်သော နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ပညာသင်သူတွေကလည်း သင်ယူနေကြသည်။
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခံယူထားသူများရှိသလို တစ်ဖက်နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားကြသူများလည်း ရှိသည်။ နယ်ပယ်အစုံကို ရောက်ရှိနေကြပြီး ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်လည်း ကျောင်းရင်း၊ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း တတ်စွမ်းသလောက် ပြင်ပကနေ အားပေးကူညီကြရင်းဖြင့် သူတို့တစ်တွေသည် တစ်ခုသောနေ့ရက်ကို မျှော်လင့်နေကြသည်။
ယင်းနေ့ကား စိတ်ချလက်ချ ပြည်တော်ပြန်နိုင်မည့်နေ့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးမှာ ကိုယ်စွမ်းသလောက် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြဖို့ ဘေးအ္တရာယ်ကင်းကင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့် အမိမြေကို ပြန်လည်ခြေချခွင့်ရကြမည့်နေ့။
“ဘယ်သူအိမ်မပြန်ချင်ရှိမလဲဗျာ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လို ဘယ်တခြားနိုင်ငံကိုမှ ဆက်မသွားဘဲ ဒီမှာပဲ နိုင်ငံမဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ ကုတ်ကပ်နေရတဲ့ဘ၀တွေ ဆိုတော့ ပိုပြန်ချင်တာပေါ့” ဟု ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်ကို ရောက်ရှိပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေသူ ကိုသွင်လင်းအောင်က ဆိုသည်။
ကိုသွင်လင်းအောင်သည် ၉၆ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမို ကရက်တစ်အင်အားစု နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အရပ်သားအစိုးရတက်လာချိန်မှာတော့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အဖက်ဖက်မှ ယိုယွင်းနေသည့် တိုင်းပြည်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင် ခြည်များ စတင်ပျို့သန်းလာတော့သည်။ အပြောင်းအလဲတွေလုပ်လာပြီး လူထု၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကို ရရှိလာသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက အံ့အားသင့်စွာ စောင့်ကြည့်နေချိန်မှာ ပြည်ပသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဦးသိန်းစိန်က ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
“စစချင်းကြားရတဲ့အခါ ၀မ်းသာတယ်။ ပြန်များပြန်ရရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲဆိုပြီး စိတ်ကူးတောင် ယဉ်မိတယ်” ဟု ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုသည်။
“စိတ်ကူးယဉ်မိရုံနဲ့တင် ကြည်နူး မှုနဲ့ မျက်ရည်ဝဲမတတ် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်”
သမ္မတကြီး၏ ဖိတ်ခေါ်သံကြားရသည့်အချိန်မှာ ၀မ်းသာစရာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ မေးခွန်းထုတ်စ ရာတွေ၊ စိုးရိမ်စရာတွေ၊ ပြီးတော့ သံသယဖြစ်စရာတွေက ပြည်ပသို့ နိုင်ငံရေးအရ တိမ်းရှောင်နေကြရသူတို့၏ ခေါင်းထဲသို့ ကဆုန်ပေါက် ၀င်ရောက်လာကြသည်။
ယမန်နှစ် သြဂုတ် (၁၇) ရက်နေ့၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်အသီးသီး၊ အသင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တာ ၀န်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံသည့် အခမ်း အနားတွင် အမှာစကားပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းထဲမှာ “အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ပြည်ပကိုရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားများကို လည်း ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်သွားတာ မရှိဘူးဆို ရင် အချိန်မရွေးပြန်လာနိုင်ဖို့ စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု သမ္မတ ကြီးက ပြော ကြားသွားခဲ့သည်။
“ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်တိုင် ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ခံယူဖို့ ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ သဘော ထားကြီးစွာနဲ့ စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟူ၍လည်း အဆိုပါမိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။
သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပြီး သူတို့တစ်တွေ မေးခွန်းထုတ် ကြသည့်အထဲမှာ ဘယ်သူတွေကို ရည် ရွယ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်တာလဲ။ ထိုက်သင့်သည့် အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေ ကျခံကြရမှာလဲ။
နိုင်ငံရေးအရ တိမ်းရှောင်နေကြသူတွေ စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိသည်က သူတို့ကို ယခုအရပ်သားအစိုးရက မည်သို့ သဘောထားမည်နည်းဆိုသော အချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေဟုမြင်မည်လား။ မြင်မည်ဆိုလျှင် မည်သို့ သော ပြစ်ဒဏ် တွေ သူတို့ခံကြရမည်နည်း။
သေချာသည်ကတော့ ၁၉၈၀ ခုနှစ် တုန်းက ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သလို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုပြီး ခေါ်သည့် ပုံစံမျိုးမဟုတ်လေရာ စိုးရိမ်မည်ဆိုလျှင် ဘက်ပေါင်းစုံမှလှည့်တွေးပြီး စိုးရိမ်စရာ တွေချည်းဖြစ်နေသည်။
နောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှု။ ရှစ်လေးလုံးဖြစ်ပြီးခါစတုန်းကလည်း ပြည်ပသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများကို ထိုစဉ်က တပ်မတော်အစိုးရက ပြန်လာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်သည့်အခါ အချို့အဖမ်းခံထိပြီး အချို့မှာ စောင့်ကြည့်ခံကြရသဖြင့် ဒီမိုက ရေစီရရှိရေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် မလုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပေ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အစိုးရနှင့် ပြည်သူ ကြား ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာပြီး အစိုးရ ဘာတွေပြောပြော၊ ဘာတွေလုပ် လုပ်သံသယမျက်လုံးများဖြင့် စောင့် ကြည့်၊ ဝေဖန်၊ ဆက်ဆံနေခဲ့ကြရသည့် အနေအထားတွင် အရပ်သားအစိုးရ တက်လာသော်လည်း အခြေအနေအားလုံးကို အစိုးရပြောတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ်၊ ယုံလိုက် ကြဖို့က ခက်နေပြန်သည်။
“ခံခဲ့ရပေါင်းကလည်း ထပ်နေတော့”” ဟု ကိုသွင်လင်းအောင်က အစချီသည်။ ပြီးတော့ အခုလို ဆက်ပြောသည်။
“ရင်ထဲမှာတော့ နှစ်မျိုးခံစားရတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ဒီလိုပဲကြားကောင်းအောင် ပြောတာနေမှာပါဆိုတာမျိုး။ သိပ် မမျှော်ပေမယ့် နောက်တစ်ခုကတော့ တကယ် ပဲဒီဟာက အစဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တကယ်ပြောင်းလဲ လာပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြန်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားမလားလို့ ရင်ခုန်မိတာလည်း တကယ်ဖြစ်မိပါတယ်”
အများစု စောင့်နေကြသည့်အချက်ကတော့ ပြည်တော်ပြန်လိုသူများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာ၊ သို့မဟုတ် ဥပဒေ ဘယ်တော့ ပြဌာန်းပေးမလဲဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့က အပြင်ရောက်နေတဲ့ လူတွေဖြစ်နေတော့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်ဝင်ရေးဆိုတာကိုပါ ထည့်စဉ်းစားရ တယ်” ဟု ကိုသွင်လင်းအောင်က ဖြည့်စွက်ပြောသည်။
“အဲဒီစကားကို ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့လက်နက်ချအရှုံးပေး ပြန်တာမျိုး မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ သဘောပါ”
၈၈ မျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုညီညီအောင်ကလည်း “ကျွန်တော်တို့ကို ၀န်ခံကတိတောင်းပြီးမှ လက်ခံတဲ့ သဏ္ဍန်ကို လုံးဝလက်မခံဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖော်ဆောင်ချင်တဲ့ လက္ခဏာ၊ လုပ်ရပ်၊ သဏ္ဍန်တွေ သဘောထားတွေပေါ်လွင်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ်မျိုးဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
အရပ်သားအစိုးရကို ယုံကြည်ဖို့ဆိုလျင် ပြည်တွင်းအင်အားစုများနည်းတူ ပြည်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုများက တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုကြသည်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးရေးဖြစ်သည်။
တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းလည်း ဦးသိန်းစိန်က ပြည်သူ့အသည်းနှလုံး ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များအပါအ၀င် ယုံကြည်မှုဖြင့်အကျဉ်းကျခံနေကြရသူ (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား) အတော်များများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်းအတွက် ပြည်ပသို့ နိုင်ငံရေးအရ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ အတော်များများ၏ အသိမှတ်ပြုမှုကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ ရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ တောင်းဆိုထားသည်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အကျဉ်းထောင်များမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မကျန်ရှိရေးဖြစ်သည်။
“အာဏာရှိနေတဲ့ လူတွေနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဟာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့ဆို တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျခံရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ် ဆိုရင်တောင် မြန်မာပြည်မှာနေရတာ လုံခြုံမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု Free Burma Coalition ကို ထူထောင်ခဲ့သူ ဒေါက်တာ ဇာနည်က ဆိုပါသည်။
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာခွင့်ရရေးဟူသောကိစ္စကို လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးက ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့က အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀)မှ ဦးသန်းမြင့် မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းက “ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံ သားများ ပြန်လာရေးအတွက် တိကျသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ် သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသွားရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့် ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အထူးဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ဖြစ်၍ ဥပေဒတစ်ရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန် မလိုအပ်ဟူ၍ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်နှင့်အညီ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပသို့ရောက်ရှိနေသည့် `မြန်မာနိုင်ငံ သားဟောင်း´ များ ပြန်လာရေးအတွက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေရန် တိကျခိုင်မာသည့် အခြေခံမူများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက် ဥပဒေတစ်ရပ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်မည် မဟုတ်ပါ ကြောင်းနှင့် ကာယကံရှင် မြန်မာနိုင်ငံသား များအနေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်သာ လိုအပ်ပါကြောင်း” ဒုတိယ၀န်ကြီးက ဖြေကြားသွားခဲ့သည်ဟု ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များမှာ ဖော်ပြပါရှိသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ပြည်တော်ပြန်မည့်သူများ မျှော်လင့်နေကြသည့် ဥပဒေပြဌာန်းပေးရေးဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်မှာေ၀၀ါးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။
ထိုအခြေအနေတွင် ပြန်လာလိုသူများအနေနှင့် ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာရန်သာ ရှိတော့သည်။
ပြည်ထဲရေးဒုတိယ၀န်ကြီး ဖြေကြားချက်အရ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားရန် အတွက် ပထမဦးစွာ မိမိရောက်ရှိနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတွင်ရှိသည့် မြန်မာသံရုံးများကို ဆက်သွယ်ပြီး သတ်မှတ်သည့် လျှောက်လွှာပုံစံများဖြည့်စွက်ကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရပါမည်။
ထို့နောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများ ပြန်လာရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့က ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေး ကြသည်ဟု ပြည်ထဲရေး ဒုတိယ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ သမ္မတကြီးဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာ တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ဆိုသည့် ကာလအတွင်း သံသယများကိုခွာချပြီး ပြည်တော်ပြန်လာကြသူများ ရှိသလို စိတ်ချလက်ချ ပြန်နိုင်မည့် အနေအထားတစ်ခု မဟုတ်သေးဟုဆိုကာ အခြေအနေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူအများအပြားလည်းရှိနေ သေးသည်။
နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဌာနနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကို ကိုးကားထားသော မဇ္ဈိမသတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ပြည်တော်ပြန်ရန် ပြည်ပရောက်မြန်မာများ လျှောက်ထားမှုသည် ငါးထောင်ဝန်းကျင်ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မှကြည့်ပြီး ပြန်မလာနိုင်သေးသူအမြောက်အမြားရှိသည် မှန်သော်လည်း မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင် လုပ် ကိုင်နေသူများမှာ ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာ လလောက်ကစပြီး မြန်မာပြည်သို့ ဥဒဟို ၀င်ထွက်လှုပ်ရှားနေ ကြပြီဖြစ်သည်။
BBC, VOA, RFA, DVB ကဲ့သို့ သော ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်သည့် စာသားများ သတင်း စာ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာများတွင် ကာလအတန်ကြာ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပါရှိရာကနေ ပြုတ်အကျ၊ ယခင်က ပိတ်ပင်ထားခဲ့သော အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ပွင့်အကျ၊ ပြည်ပက မြန်မာမီဒီယာသမားများဆိုတာ ပြည်တွင်းက သတင်းသမားများနှင့်အတူ အပြေးအလွှား သတင်းယူခွင့်များရသွားကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်လောက်ကအထိ ပြန်လာလျှင် လေဆိပ်မှာပဲ အဖမ်းခံထိနိုင်သည့် အဆိုပါ သတင်းသမားများမှာ အခုဆိုလျှင် လွှတ်တော်အတွင်းသို့ပင် ၀င်ရောက်ပြီး သတင်းရယူ၊ ရုပ်သံရိုက်ကူးနိုင် ကြပြီဖြစ်သည်။
မဇ္ဈိမသတင်းအေဂျင်စီသည် ယနေ့အခါမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ “m-zine+”အမည်ရှိ စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုပင် ပြည် တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်နေ ပြီဖြစ်သည်။
မဇ္ဈိမသတင်း အေဂျင်စီကို ထူထောင်သူ ဦးစိုးမြင့်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က မြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာကသိအောင်ဟု ဆိုကာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဦးတည်ပျံသန်းလာသည့် ထိုင်းလေယာဉ်အား အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုလ်ကတ္တားမြို့သို့ ပြန်ပေးဆွဲသွားပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မော်ကွန်းက မေးမြန်းကြည့်သမျှ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် တတ်သိပညာရှင်များက အမိမြေသို့ ပြန်လာသည့်တစ်နေ့တွင် ဘယ်နယ်ပယ်မှာ ဘာတွေလုပ်ကြမည်ဆိုပြီး မျှော် မှန်းချက်တွေ ပြည့်နှက်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကိုညီညီအောင်ကတော့ သူပြည်တော်ပြန်လာသည့်အခါ တိုက်ပွဲအတူဝင်ခဲ့ကြသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ရဲဘော်၊ ရဲမေများနှင့် အတူဆုံးဖြတ်ချက် ချကာ “ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီး လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေးကို ဆောင်ရွက်သွားမယ်” ဟု ဆိုသည်။
တိုင်းပြည် ဘက်ပေါင်းစုံတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုတည်း ကောင်းနေလို့ကမပြီး။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်သည့် ပြည်ပရောက် ပညာရှင်များကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု ပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသူများက ထောက်ပြပြောဆိုလာကြသည်။
ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ပြောကြားခဲ့သည့် အမှာစကားထဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာပညာတတ်များကို သူက အခုလို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။
“ပြည်ပက မြန်မာပညာတတ်များ . . . ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာ လမ်းခင်းနေပါပြီ။ အဲဒီခင်းတဲ့လမ်းဟာ ပန်းခင်းတဲ့ လမ်းဖြစ်စေချင်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ် တိုင် ပန်းတွေစိုက်ပျိုးမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”
ပြန်လည်ထူထောင်စ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအခြေအနေအရ ပညာရှင်တွေက နေရာတိုင်းမှာ လိုအပ်နေကြောင်း အရပ်ဘက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်တက်ကြွကြွ လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူများကဆိုသည်။
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင် က “ပညာရှင်တွေ ပြန်လာဖို့ဆို တာက ပညာရှင်တွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အကုန်လုံးပေးထားဖို့လိုတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေ၊ ထောက်ပြမှု တွေကို လိုက်နာဖို့လည်း လိုတယ်” ဟု သူက ထောက်ပြသည်။
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း လေ့လာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နံပါတ် တစ်အဆင့်ရှိသည့် Wisconsin တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့် ဒေါက်တာ ဇာနည်ကတော့ သူပြည်တော်ပြန်သည့် အခါ တိုင်းပြည်၏ ပညာရေးစနစ် တည် ဆောက်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီဖို့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးဟုဆိုသည်။
“ပညာရေးစနစ်ဆိုရာမှာ မြို့ပေါ်က လက်တစ်ဆုပ်စာ လူနည်းစုတွေတင်မကဘဲ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းစုံရှိတဲ့ မြန်မာတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွေးတတ်၊ ခေါ်တတ်အောင်ကျောင်းတွင်း ပညာရေးစနစ်ရော ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးစနစ်ပါ ဒီနှစ်ခုလုံးပါတယ်” ဟု ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့ဖူးသူ ဒေါက်တာ ဇာနည်က ဆိုပါသည်။
“ဆရာက အသိဆုံး၊ အဖေက အသိ ဆုံး၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အသိဆုံး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသိဆုံးဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီလူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အံမ၀င်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေအစား အတွေးအခေါ်သစ်တွေရှိဖို့လို အပ်တယ်”
မြန်မာပြည်၏ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သည်းခံတတ်ရန် စိတ်ဓာတ်အသစ်တွေ လိုသလို မတူကွဲပြားသည့် ဘာသာဝင်တွေ အကြား အချင်းချင်းနားလည်နိုင်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဝါဒကို လက်ခံတတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီပညာရေး၊ သို့မဟုတ် “ယဉ်ကျေးမှုစုံ ဒီမိုကရေစီ” သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ လိုအပ်ကြောင်းလည်း သူက ထောက်ပြပြောဆိုပါသည်။
ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော နိုင်ငံအဖြစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းစ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရာတိုင်းမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အမြောက်အမြား ရှိနေပေလိမ့်မည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့အခြေစိုက် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း၏ မန်နေဂျင်း အယ်ဒီတာ ကိုကျော်စွာမိုးက ဆိုပါသည်။
“ဒါတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သည်းခံရမှာပဲ၊ transitional period (အကူးအပြောင်းကာလ)မှာ”ဟုသူက ဆိုသည်။
မကြာမီ လွှတ်တော်ထဲတွင် တင်သွင်းဆွေးနွေး၊ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းဖွယ်ရှိသည့် စာနယ်ဇင်းဥပဒေ အနေ အထားကို ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းအနေဖြင့် သုံးသပ်ကာ လာရောက်အခြေချဖို့ စဉ်းစားနေကြောင်းလည်း ကိုကျော်စွာမိုးက ဆိုပါသည်။
ပြည်တွင်းသို့ လာရောက်အခြေချ မည့် မီဒီယာများအနေနှင့် လောလောဆယ်ကာလတွင် ပြည်ပမှာ ရေးသားခွင့်ရခဲ့သည့်အတိုင်း အတွင်းမှာ အလုံးစုံ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားခွင့်ရဦးမည်မ ဟုတ်သလို ပြည်တွင်းမှာ အခြေကျပြီး သား သတင်းစာစောင်များနှင့် ဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဈေးကွက်ဝေစုရရှိရေးမှာ လည်း လွယ်ကူလှသည်တော့မဟုတ်။
ထို့ထက် ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ခွင့် ရဖို့ကြိုးစားရသည်မှာ ပြည်ပရှိ မြန်မာ မီဒီယာသမားများအတွက် တော်တော် ခေါင်းခဲရသော ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါမီဒီယာသမားများက ဖွင့်ဟပြော ဆိုလာပါသည်။
“တကယ့်တကယ်ကျတော့ အစိုးရအနေနဲ့ mechanism (လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) မရှိသေးဘူး။ တချို့ဝန်ကြီးဌာနတွေ တက်တက်ကြွကြွလုပ်နေတာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီဒီယာပြန်လာလုပ်မယ့်သူအတွက် လုပ် ရမယ့် mechanism က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူး” ဟု မဇ္ဈိမသတင်းဌာနက ဦးစိုးမြင့်ကဆိုသည်။
ပြည်တော်ပြန်များ ပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရအနေဖြင့် စီစဉ်ပေးသင့်သည်များကို စီစဉ်ထားသင့်ကြောင်းလည်း သူက ဆိုသည်။
“တို့ဆို မှတ်ပုံတင်လုပ်ရတာကအစ ခက်ခဲတယ် ... မှတ်ပုံတင်မရှိရင် အိမ်တောင် ငှားလို့မရဘူး” ဟု မြန်မာပြည်မှာပဲ မီဒီယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်တော့မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ ပြန်လာခဲ့သော ဦးစိုးမြင့်က ပြောပါသည်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် အခြားနယ်ပယ်များတွင် လုပ်ကိုင်မည့်သူများအတွက် မည်မျှလုပ်ခွင့်သာ၊ မသာဟူသော မေးခွန်းကလည်း ရှိသေးသည်။
လုပ်ခွင့်မသာနိုင်မှန်းသိလျက်နှင့် ရသည့်အနေအထားကနေ ရအောင်လှုပ်ရှားကြဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူများလည်းရှိပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးနေသူ ဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့ ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို သူက ကြိုတင် တွက်ဆထားသည်။
“လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေရဲ့ဘ၀ဟာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ပန်းမွေ့ရာ ကော်ဇောခင်းထားတာမရှိဘူး။ အနည်းနဲ့ အများ စွန့်စားရတာ၊ အခက်အခဲကြုံရ တာရှိပါတယ်”
“ဒါမျိုးတွေရှိမှပဲ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု စစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့တောင် ပြောလို့ရနိုင်တယ်” ဟု သူက ဖွင့်ဟပါသည်။
မွန်းကျပ်၊ လှောင်ပိတ်၊ အလင်းမဲ့ခဲ့သော အနေအထားမှ မျှော်လင့်ချက် လင်းရောင်ခြည်အမျှင်တန်းလေးများကို မြင်တွေ့နေရသည့် သည်ကနေ့ခေတ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တော်ပြန်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သလို တချို့သောသူများအတွက်လည်း ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို စိတ်ချလက်ချ ခြေထောက် ချဖို့ မ၀ံ့ရဲသည့် အနေအထားများကလည်း ဆက်လက် ရှိနေဦးမည်သာ။
အကြောင်းကတော့ မည်သို့သော သူများမှာ မည်သို့သော အပြစ်ရှိသည်၊ မည်သည့်ပမာဏလောက်ကြီး လေးသော အပြစ်ကို အစိုးရက မည်သည့်အဆင့်ထိ လျှော့ချမည်၊ သို့မဟုတ် သက်ညှာသည့် အနေဖြင့် အပြစ်မယူ၊ ကြည်ဖြူစွာနှင့် ခြေချခွင့်ပြုမည်ကို တိတိပပ òန်ကြား ချက်တစ်စုံတရာ ထွက်မလာသေးသော ကြောင့်ပင်။
ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်အခါကျမှ ပြည်တော်ပြန်မည့်သူများအတွက် ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာ၊ သို့မဟုတ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပေးမည်ကို မသိရှိနိုင်တော့သည့် သည်ယနေ့အနေအထားတွင် သားဖြစ်သူများ ပြန်လာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားမိတိုင်း ပူဆွေးဝမ်းနည်းရပါသည်ဟု ကိုညီညီအောင်၏မိခင် ဒေါ်စန်း စန်းတင်ကဆိုသည်။
သားနှစ်ယောက်တည်းသာရှိသော ဒေါ်စန်းစန်းတင်မှာ ထိုသားနှစ်ယောက်နှင့် အတူမနေရသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ်ကြီးများတောင်ရှိခဲ့ပြီ။
တကယ်တော့ ဒေါ်စန်းစန်းတင်တို့ မိသားစုသည် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသော မိသားစုဟုဆိုနိုင်ပြီး သူ၏ဆွေမျိုးများမှာလည်း နိုင်ငံရေးနှင့်နွယ်သော ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းဟုဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သားဖြစ်သူ နှစ်ယောက်မှာ ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရစဉ် သူနှင့် သူ့ဆွေမျိုးထဲမှ သုံးယောက်သည် ၂၀၀၇ အရေးအခင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ ခံကြရသည်။ (အခုတော့ သူတို့လေးယောက် စလုံး လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။)
ဒေါ်စန်းစန်းတင် အစိုးရိမ်ဆုံးကား အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သည့် ကိုညီညီအောင်အတွက်ဖြစ်သည်။ အမေဖြစ်သူ မိတ္ထီလာထောင်မှာ အကျဉ်းကျနေစဉ် အမေကို လာတွေ့မည်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသူ ကိုညီညီအောင်တစ်ယောက် မြန်မာပြည်ပြန်လာခဲ့သည်။
သို့သော် အမေဖြစ်သူနှင့် တွေ့ခွင့်မရလိုက်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာပဲ သူ့ကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြပြီး ထောင် သုံးနှစ်ချလိုက်ကြသည်။ ထောင်ထဲတွင် ၆ လခန့်နေပြီးသောအခါ ၎င်းကို ထိုစဉ်က တပ်မတော် အစိုးရက ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်သည်။ ထောင်ထဲတွင် အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသဖြင့် ကိုညီညီအောင်မှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာရသွားခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခါလည်း ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးနှင့် သားငယ်တွေ့ကြုံရမည်ကို ဒေါ်စန်းစန်းတင် အကြီး အကျယ် စိုးရိမ်နေသည်။
“ဟင့်အင်း၊ သားကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြန်လာခွင့်မပြုနိုင်သေးဘူး၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးထားတာမှ မဟုတ်တာ” ဟု ဒေါ်စန်းစန်းတင်က ဆိုသည်။
သားများနှင့်ဝေးနေရသော အသက် ၆၀ ၀န်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်သည့် ဒေါ်စန်းစန်းတင်၏ ကျန်းမာရေးက ကောင်းလှသည်မဟုတ်။ လောလောဆယ်မှာ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးချိုရောဂါတို့ရှိနေပြီး လည်ပင်းမှာလည်း အဖုအကျိတ်တို့ ရှိနေသောကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဆေးရှစ်မျိုး (ဆေးအလုံးပေါင်း ၁၁ လုံး) သောက်နေရသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုသို့ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်ကြားက သားများအပါအ၀င် ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေသူများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန် လာနိုင်ရေးအတွက် ဒေါ်စန်းစန်းတင် လုံးပန်းနေသည်။
သူ့ကို အင်တာဗျူးနေချိန်မှာ ဒေါ်စန်းစန်းတင်သည် ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ် လည်အခမ်းအနားတက်ရောက်ပြီး အိမ် ပြန်နေချိန်ဖြစ်သည်။ သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့ မှာကျင်းပသည့် ရှစ်လေးလုံးအမှတ်တရ အခမ်းအနားတွင်လည်း ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စိတ်ချလက်ချ ပြန် လာနိုင်ရေး အရေးဆိုခဲ့ကြသည်ဟု ဒေါ်စန်းစန်းတင်က ဆိုသည်။
“ညတိုင်း သားတွေကိုအိပ်မက်မက် တယ်...သားနှစ်ယောက် ပြန်မလာနိုင်သေး သရွေ့စိတ်ချမ်းသာ နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး”
စိတ်ကို အားတင်းပြီး ပြောနေရသော်လည်း ဒေါ်စန်းစန်းတင်၏အသံက ဖုန်းထဲမှာတုန်နေသည်။ ထိုသို့ အသံတုန်နေသည့်ကြားမှသူ့ရင်ခွင်နှင့်နှစ်ပေါင်း များစွာထိတွေ့ခွင့်မရသည့် သားနှစ်ယောက်အတွက် ဒေါ်စန်းစန်းတင် ဆက် ကာ၊ ဆက်ကာ တောင်းဆိုနေမိသည်က-
“အစိုးရကို တောင်းဆိုပါတယ် . . . လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးပေးပါလို့”။
ဉာဏ်လင်း၊ ဇေယျာလှိုင်၊ ၀င်းဇော်လတ် ရေးသားသည့် မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၁ တွင် ပါရှိသော မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး ဆောင်းပါးကို YPI မှနေ၍ ဘလော်ဂါ အကျွန်ုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကွန်ရက်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား များ၏ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကွန်ရက် က သြဂုတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ ညနေ (၃)နာရီတွင် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ဝေဇယန္တာလမ်းရှိ ၈၈မျိုးဆက်ရုံး တွင် ဖိတ်ကြားထားသော သတင်း နှင့်စာနယ်ဇင်းမှပုဂ်္ဂိုလ်များကို အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့သည်။၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်း ကိုနိုင်က အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချိန် အနည်းငယ်နောက်ကျခဲ့ခြင်းအပေါ် ဦးစွာ ရှင်းပြခဲ့သည်။အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရမည့်အချိန်များအတွင်း အရေးပိုကြီး၍ဦးစားပေးရမည့် ကိစ္စကြီးငယ်များမှာအများသိကြ သည့်အတိုင်း မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဖြစ် ပွားခဲ့ရခြင်းများအပေါ်ပိုမိုအာရုံ စိုက်နေရသဖြင့် အချိန်အနည်း ငယ်နောက်ကျခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပမာလျှပ်စစ်မီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်ကိစ္စကြီးများဖြစ်ပွား လာပြီးနောက်ထိုကိစ္စကြီးငယ် နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စခရီးစဉ်အပေါ် ပိုမိုအားစိုက်နေရသောကြောင့် ဆိုသည်။ စာမျက်နှာ ၆၄မျက်နှာ ရှိ ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲစောင့် ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာတွင် အစွဲကင်းကင်းဖြင့် ပကတိ အရှိ အတိုင်းတင်ပြထားကြောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါသည်။ပြည်သူ များကို မဲပေးရုံဖြင့် မလုံလောက် ကြောင်းမဲရုံပိတ် မဲရေတွက် ပြီးစီး သည်ထိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုသိရှိစေလို ကြောင်း၊ နောက်နောင်ဖြစ်ပေါ် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းတွင် သတိထားဆောင်ရွက်ရမည်များ ကို ပြည်သူအားလုံးနားလည်သိ မှတ်ထားနိုင်ကြရန် ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့် ရှင်းလင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးကပြော ကြားရာတွင် နိုင်ငံတကာမှာဆို လျှင် ယခုလို အလုပ်မျိုးအတွက် လူများစွာနှင့်ငွေအမြောက်အမြား လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေ နှင့်နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲကို သတိထားစောင့်ကြည့်လေ့လာရန် အားထုတ်နေကြတာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအလုပ် ကို လုပ်ရန်တာဝန်ရှိတယ်၊လိုအပ် တယ်လို့ခံယူလို့ ဒီအလုပ်ကို လုပ် ဖြစ်တာပါ။နောက် ဒီအစီရင်ခံစာ ပါ အချက်အလက်မှန်များက နောင် ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲ တွေမှာ အညွှန်းများအထောက် အပံ့များဖြစ်သွားမည်လို့ပြောချင် ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသား တိုင်းဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွေတိုင်း မှာ တက်တက်ကြွကြွစောင့်ကြည့် လေ့လာရန် လိုအပ်ပါတယ်။သတင်း နှင့်မီဒီယာများဘက်ကလည်း ယခုအတွေ့အကြုံတွေအရ အချို့ သောနေရာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ယခုထက်ပိုမို ဂရုစိုက် အာရုံစိုက် ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းစသည်ဖြင့် ကိုကိုကြီးကရှင်းလင်းပြောကြား သွားသည်။
ယခုထုတ်ပြန်သည့် အစီရင် ခံစာကို ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံရေးပါတီ များနှင့်စိတ်ဝင်စားလိုအပ်သူများ ကို ဖြန့်ဝေသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
Tags: ဗဟုသုတ, ကြေငြာချက်, နိုင်ငံရေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၂/၂၀၁၂) ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁
Postado Tuesday, August 28, 2012 at 6:43 AM
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၂ နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ တို့အရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအား ယှဉ်တွဲပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးတွင် ပြောင်းလဲတာဝန်ပေ
(၆)ဦးကျော်ဆန်း၊ သမဝါယမ ဝန်ကြီးဌာန
(၇)ဦးအုန်းမြင့်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန
ယနေ့ (သြဂုတ် ၂၈ ရက်) တွင် ကျင်းပမည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးကြမည်
(၁) အမျိုးသား လွှတ်တော် အာဆီယံ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး အသိုက်အ၀န်း
ဆိုင်ရာ ကော်မတီက ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြား တင်သွင်းခြင်း။
(၂) အမျိူးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရာ ကော်မတီက
ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြား တင်သွင်းခြင်း။
(၃) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း ဥပဒေအရပေးအပ်သော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင်ခြင်း တို့အရ စွပ်စွဲပြစ်တင် သည့် အဆိုကို တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၆) ဦးအပါအ၀င် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၁၆) ဦးက ဆွေးနွေးခြင်း။
(၄) ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးနေသော ရန်ကုန်မြို့အား ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စီးပွားရေး မြို့တော်ကြီး အဖြစ်သို့ အမြန်
အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီကို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လက်အောက်တွင် ထားရှိကာ မြို့တော်
စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေနှင့် အညီ ကော်မတီပိုင် ရံပုံငွေကို တိုင်းဒေသကြီး
အစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ပြုရေး ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား
တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို တင်သွင်းခြင်း။
ယနေ့ (သြဂုတ်လ ၂၈ရက်) တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးကြမည်
(၁) ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေများကို သင့်တင့်မျှတသော
အနေအထားဖြင့် ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊မရှိ မေးခွန်း။
(၂) မြန်မာ့ လယ်ယာဖွံဖြိုးရေးဘဏ်တွင် လယ်သမား အမည်ပေါက် ငွေစု
စာအုပ် အမည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။
(၃) ဖွံဖြိုးတိုး တက်လာသည့် နိုင်ငံစီးပွားေ
ရးလုပ် ငန်းများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု အစီအစဉ်ရှိ၊မရှိ မေးခွန်း၊
(၄) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသေးစား နှင့်
အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအတွက် ချေးငွေမည်မျှထုတ်
(၅) အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပေးပို့
သော"မြေသိမ်း(သတ္တုတွင်းများ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်း"ကို လက်ခံရရှိကြောင်း အသိပေးတင်ပြခြင်း။
Copy From Eleven Media Facebook
Postado Wednesday, August 22, 2012 at 5:52 AM
ကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်တော့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံမိပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ စကားလက်ဆုံကြမိတယ်။ အဓိကတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ….။ အဲဒီ့ထဲက အချက်အလက်တချို့ ဆွဲထုတ်ပြရရင် အထက်မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာ သူ့အစုနဲ့သူ တည်ရှိနေကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်လောက်ကတည်းက ဘယ်သူတွေဟာ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းကို ဘယ်သူကမှ ပစ်ပယ်လို့မရပါဘူး။ ခုလိုပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မျိုး
မှာ နာမည်ကြီးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တာတွေ၊ နာမည်ကြီးတွေကို ထောက်ပံ့ချင်တာတွေနဲ့ နာမည်ကြီးတွေကို အမှီသဟဲပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပုံရိပ်တစ်ခုကို အတင်းတည်ဆောက်ချင်တာတွေကို တွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အဲဒီလိုလုပ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ မိမိသည် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးတလျှေ
ာက်လုံးမှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ခဲ့သလဲ၊ ထောင်ကျ တာချင်းအတူတူ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ဘယ်လိုလေ့လာမှုတွေလုပ်ခဲ့ရသလဲ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချိုးအကွေ့ အလှည့်အပြောင်းမှာ ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီး မားမားမတ်မတ် ဘယ်လိုရပ်တည်ပေးခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ စံနှုန်းတွေပေါ်မှာ အခြေခံတယ်လို့မြင်မိတယ်။
ရရင် အရင်အခြေအနေတုန်းက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာတောင် နိုင်ငံရေးကို ပြောခွင့်မရခဲ့ဘူး။ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ဖမ်းတယ်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင် အပိုအလုပ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား ထောင်ထွက်ဆိုရင် ဘယ်သူကမှအရေးတယူမလုပ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီသူတွေကပဲ ဒီကနေ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းတစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေးသမားထောင်ထွက်တွေနား
ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ချည်းကပ်တယ်။ လိုအပ်တာတွေကို အတင်းကာရောထောက်ပံ့တယ်။ ကျေးဇူးမတင်တင်အောင်လုပ်ကြတယ်။ သူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုအောင်၊ သတိထားမိအောင်လုပ်ကြတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကုန် ဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မမြင်ချင်မှအဆုံး၊ မကြားချင်မှ အဆုံး ပါပဲ။ အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးတွေရဲ့လက်မှတ်လေးတခုရရင် စကင်ဖတ်ပြီးတင်ရတာလဲအမောပဲ။ တခါတခါ စဉ်းစားကြည့်မိတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒါကြီးလားဆိုတဲ့ အတွေးတောင်ပေါ်တယ်။
နတာဆိုတော့ တချို့ကလည်းမေးကြတယ်။ စာမရေးတာ ကြာလို့တဲ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးချင်၊ ပြောချင်နေတာဆိုတော့ အချိန်ကိုလု၊ စာဖတ်ချိန်ကိုပြန်ပေး ရတယ်။ စာရေးတယ်ဆိုတာမှာလည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို အတင်းကာရော ခွရေးနေလို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ လက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်အခြေအနေ၊ သတင်းဂျာနယ်တွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ လူထုလူတန်းစားအသီးသီးရဲ့ အသံတွေ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးတွေ အစရှိတာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း တီးမိ၊ ခေါက်မိရှိထားရသေးတယ်။ တခါတလေ သတင်းစာဆရာဖြစ်ချင်တာက မလွယ်ပါလားလို့တွေးမိပြီး သူများတွေလို ပင်နီလေးဝတ်၊ ကချင်လေးဝတ်၊ လည်ကတုံးလေးနဲ့၊ ယောပုဆိုးလေးနဲ့ ရင်ဘတ်မှာ ကြုံရာတံဆိပ်တပ်ပြီး ပေါက်ကရလျှောက်လုပ်ရရင်တောင် ဒီလောက်ပင်ပန်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိသား။
ဒီတခါတော့ တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့အကြော
င်း တီးမိခေါက်မိသလောက် ပြောကြည့်မယ်။ ဒီကနေ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေကို အာဏာခွဲဝေအပ်နှင်းတယ်လို့ သိထားတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကတောင် လမ်းညွှန်ချက်တွေ၊ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေ၊ မိန့်ခွန်းတွေထဲမှာ ရှိပြီးသားပါ။ ဒါတောင် တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်အစို
းရအဖွဲ့တွေ ဘယ်လောက်လိုက်နာ နေပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နေပြီလဲဆိုတာ အကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ အထူးပြောချင်တာ ကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာ သမ္မတကြီးလမ်းညွှန် ချက်နဲ့အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်တာကို တွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ ဒီတော့ကာ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ ကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွေကို အစဉ်မပြတ်လေ့လာစောင့်ကြည့်လမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်းအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားမယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပြည်သူလူထုဆီကမဲတစ်ပြားဟာ ဒီလိုအချိန်မှာ သေနတ်ထောက်ပြီးတောင်းလို့မရဘူး၊ ဓားမိုးပြီးတောင်းလို့မရဘူး၊ လမ်းခင်းပေးမယ်ပြောပြီး၊ ပိုက်ဆံချေးမယ်ပြောပြီးတောင်းလုိ့မရတော့ဘူး ဆိုတာလေးကိုသိရင် မိမိတို့အစိုးရသက်တမ်းမှာ နာမည်ကောင်းလိုချင်ရင် ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အထူးပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကျန်ပါသေးတယ်။ စနစ်ဟောင်းကခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိနေတဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုဟာ ဘယ်သူ့ကိုအဖေခေါ်ရမှန်းမသိဖြစ်ြ
ဖစ်လာတယ်။ ဒီကနေ့ ဒေသအသီးသီးမှာ မတရားမှုတွေ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာရဲ့ မီးလင်းရေးကော်မတီက ဘာကောင်၊ ညာကောင်ဆိုသူတွေက ပြည်သူတွေရဲ့ပိုက်ဆံတွေကို မတရားခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေဟာ ကျန်ရှိနေသေးတယ်။ ကျေးရွာလူထုဘက်ကကြည့်ရင် ခံပြင်းစရာလဲကောင်း၊ သနားစရာလဲကောင်း၊ တတ်သိနားလည်တဲ့သူတွေက တိုင်လို့ရတယ်ဆိုလို့သာ တိုင်လို့ရတဲ့ဌာနတွေဆီကို တိုင်စာတွေရောက်လာကြတယ်။
နစဉ်ကာလမှာ အောက်ခြေရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိတော့ မိမိတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို လက်တံရှည်ရှည်ထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူလူထုရဲ့ တိုင်ကြားစာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ကြတော့ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်တွေကို အောက်ခြေအထိဘာကြောင့်မထားတာလဲ၊ ထားသင့်သလား၊ မထားသင့်ဘူးလား၊ ဒါက မေးစရာဖြစ်လာတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် တွေကကော အသနားခံတိုင်စာကော်မတီတွေတော့ ရှိပါရဲ့ ဘယ်လောက်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိနေပြီလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုအသံကို အမှန်တကယ်ကြားချင်တယ်ဆိုရင် သမာသမတ်ရှိတဲ့၊ သမိုင်းရှိတဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ အောက်ခြေကစပြီး တိုင်စာကိစ္စတွေကို တခုချင်း မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ စုံစမ်း၊စစ်ဆေး၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်တဲ့ အစိုးရတရပ်ဖြစ်လာမယ်။ အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြည်သူလူထုကလည်း တတပ်တအား ပါဝင်လာမယ်။ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေကလည်း မိမိတို့တာဝန်ယူထားတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုကို ဘယ်လောက်အထိ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနေပြီလဲဆို
တာ ပြန်လည်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်သင့်ပြီလို့ အကြံပေးချင်တယ်။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလဖြစ်နေလို့ တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက် ပြောကြည့်တာပါ။
ဒီစကားလုံးကြားဖူးတာ ကာလသိပ်မကြာသေးပါဘူး အဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်း ကွဲကြ၊ ပြဲကြဖြစ်ကြရတဲ့ အဓိကအကြောင်းဟာ အချင်းချင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုအာ
းနည်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာ သိပ်ကိုအားနာတတ်ပါတယ်။ အားနာမှုနဲ့အတူ ငါက ဒီလိုပြောလိုက်ရင် သူကငါ့ကို ဘယ်လိုထင်သွားမလဲဆိုတဲ့ အတွေးကနေပဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ ဝေးဝေးလာတယ်။ အဲဒါကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်
နေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေနဲ့ တော့ အလှမ်းဝေးသထက် ဝေးလာသလို ခံစားရတယ်။ မိမိအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို မိမိကလည်း မိမိသိချင်တာ မေးရမယ်၊ ပြောချင်တာပြောရမယ်။ ခေါင်းဆောင်ကလည်း မိမိကို မကြိုက်တာကို ဒဲ့ပြောရမယ်။ လိုအပ်တာကိုလည်း ပြုပြင်ဖို့ ပြောရမယ်။ ဒါဆိုမိမိနဲ့ မိမိအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုတာ တသားတည်းဖြစ်သွား မယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဟာ အဆင်ပြေချောမွေ့မယ်၊ လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ဘူး။ လူကြားထဲမှာ ပြောတာတို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတာတို့ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်နေရာနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့သူတွေပဲ။ အဲဒါ ကျွန်တော်မြင်တဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာ သုံးတတ်ရင်ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင် ဘေးပါပဲ။
ကမှာပါ။ နာမည်ကျော်လူသိများတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးလို့ြေ
ပာရမည့် အဖွဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ သတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ပါ တယ်။ သူတို့ကထုတ်ပြန်ရုံပဲထုတ်ပြန်တာ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆန်းစစ်တာမျိုးမလုပ်ဘူး။ အဲဒီမှာပဲအွန်လိုင်းအသုံး ပြုတဲ့သူတွေကအသံဗလံတွေကြားရပါတယ်။ တခါလာလဲဒါကြီးပဲ၊ တခါလာလဲဒါကြီးပဲတဲ့။ ဆိုလိုတာက ဖေ့စ်ဘွတ်မှာဓာတ်ပုံတင်တဲ့အခါ အယ်လ်ဘဏ်လုပ်ပြီးတင်တင်ကြတာ တော်တော်များများသိပါတယ်။ အဲဒီပြန်ကြားရေးကြီးကတော့ သတင်းတင်တဲ့အခါမှာ စုစုပေါင်းဓာတ်ပုံကတစ်ပုံ၊ Figure ကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးက အကြီးကြီး၊ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ပါချင်လဲပါတယ်၊ မပါချင်လဲမပါဘူး။ တင်သင့်တာက ခရီးစဉ်တခုကိုသွား တဲ့အခါ အဲဒီ့ခရီးစဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ၁၅ ပုံလောက်ရိုက်လာမယ်ဆိုရင် တခါတင်တဲ့အခါ ၇ ပုံ ၈ ပုံလောက်တော့ တင်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှ လူစုံတက်စုံပါမှာပေါ့။ ဒါမှလည်း ပြန်ကြားရေးဆိုပြီး လက်ခံကြမှာပေါ့။ မတင်တတ်တာလား၊ မလုပ်တတ်တာလားဆိုတာတော့ အဲဒီ့အဖွဲ့ရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကြီးရဲ့ လေ့လာမှုနဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ တခုတော့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာတော့ သတင်းစာပညာသင်တန်းတို့၊ မီဒီယာပညာသင်တန်းတို့၊ ပြန်ကြားရေးလုပ်ပုံလုပ်နည်းသင်တန်းတို့မှ ရှိမှမရှိတာ။ (ပြောသာပြောရတာ ရှေ့ပြောနောက်ကြည့်၊ ညပြောအောက်ကြည့်ဆိုသလိုပဲ)
အင်တာနက်မှာဖတ်လိုက်ရတယ်။ မြောင်းမြမြို့ NLD ပါတီဝင်တွေက မြောင်းမြမြို့ NLD ကို ဆန္ဒပြကြတယ်တဲ့။ ၂ ခါလောက်ဖတ်လိုက်တယ်။ မယုံလို့။ ဘယ်နှယ့် တခါမှမကြားဖူးဘူးလေ။ မိမိပါတီကို ပါတီဝင်တွေက ဆန္ဒပြကြတာ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးပြန့်သွား
တယ်။ ထင်ကိုမထင်တာ။ မှန်တယ် လူထုလူတန်းစားအသီးသီးမှာ လူ့အခွင့်အရေးအရကြည့်ရင် မိမိဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိရမယ်
။ နေရာတိုင်းမှာ အဲဒီ့အသံတွေကြားနေရတယ်။ လူငယ်တွေကိုလုပ်ခွင့်မပေးတာ၊ လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ်တာ၊ မိမိနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုနေရာတွေပေးတာ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မီးသတ်ဗိုလ်တွေကျနေတာပဲ။ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပေးပြီး သေနတ်သာပေးထားရင် မိမိနဲ့ သဘောထားမတူတဲ့သူတွေကို ချက်ချင်းများပစ်သတ်မလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာလည်းရှိ တယ်။ တမူးဘက်ကဒေသခံလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တုန်းကဆိုရင် ဆွဲစားချင်တာကတော်တော်များတယ်ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်သွားကြတယ်။ အပြုသဘောနဲ့ပြောရရင် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးက အဲဒီစနစ်ကြီးကိုပဲ ပြန်သုံးမယ်၊ အောက်ခြေအထိအသံတွေကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းတဲ့ အိမ်ကြီးတလုံးလိုဖြစ်သွားမှာပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ ကားတံခါးဖွင့်ပေးတာတွေ၊ ထီးဆောင်းပေးတာတွေ၊ ပစ္စည်းသည်ပေးတာတွေက တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အခွင့်ထူးခံစနစ်တွေပဲ။ ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာ မဆလနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကျင့်စဉ်တွေကို ယူလာကြဦးမလို့လားဗျာ။
ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်မှာ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌကစလို့ လာဘ်ယူနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ တစ်ကယ်ဖြစ်ချင်၊
တစ်ကယ်လုပ်၊ အဟုတ်ငတ်ရမည် ဖြစ်သွားမယ်။ သမ္မတက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပပျောက်ရေးလုပ်မယ်တဲ့။ လွှတ်တော်မှာတော့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြရ မယ်ဆိုတဲ့ အဆိုကရှုံးနိမ့်သွားတယ်တဲ့။ (နဲနဲလေးများလွဲနေသလားလို့)။ ကိုယ်ကသိပ်ဥာဏ်မမီတော့ လိုက်ကို မမီတော့ဘူး။ ၀န်ထမ်းတွေသာလောက်ငတဲ့ လစာ၊ ခံစားခွင့်တွေကို တိုးမပေးပဲနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတွေကို အရေးယူမယ်ဆိုရင် ခရီးကြမ်းတစ်ခုကို ဖိနပ်မပါပဲ ခြေကျင်လျှောက်ရမည့်ကိန်းဆိုက်
သွားနိုင်တယ်။ တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေခမျာ သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ လောက်ငနေရင်တော့ အဆင်ပြေကြမှာပါ။ ဒီကနေ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိနေတာလဲဆို
ရင်၊ ပတ်စ်ပို့ရုံး၊လိုင်စင်ရုံး၊ MFTB ရုံး၊ အကောက်ခွန်ရုံး၊ အခြားအခြားသော ကျွန်တော်မသိသောရုံးများစွာ ကျန်သေးပါသေးတယ်။ ဒီတော့ကာ လုပ်ကြည့်ပါဦးလို့ပဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။
့သူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကျွန်တော့်ကိုလက်မခံတော့ဘူးဆို
ရင်လည်း ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းပြီးနောင်တရနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်က မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုမှ ခံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ပွင့်လင်းရိုးသားစွာပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို အားလုံးဆီက ရသလောက် သင်ယူသွားပါမယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော့်မှာရေးလက်စဆောင်းပါးတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုသွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ရေးလက်စလေးလဲရှိပါတယ်။ တပတ် တပုဒ်လောက်တော့ ကြိုးစားပြီးရေးသွားပါမယ်။ ကျွန်တော်စာတွေကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း၊ စိတ်ရှည်၊သီးခံပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရောက်အောင် ပဲ့ပြင်ဆုံးမပေးခဲ့တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားရင်း အဆုံးသတ်ပါရစေ။ လွတ်လပ်စွာ၊ပွင့်လင်းစွာ၊ အားမနာတမ်း ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းပြောကြားချင် ပါတယ်။
ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် VOA အမေရိကန်
အသံမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဏ်းအပေါ်ကျေနပ်အားရသူများရှိသကဲ့သို့ အားမရသူများလည်းရှိလေသည်။
ချုပ်ထားနိုင်ခြင်း(keeps under control, at least for the moment) ဖြစ်သည်။
ထို့ ပြင်သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာဟုအမည်တပ်နေကြသူများကိုသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်က
ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခုမှအစပြု” သည်ဟုသုံးသပ်ပြသွားပါသည်။
ဤသူများ သည်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုသာမကသူတို့ နှင့်မျိုးတူ၍
သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့်မိန်းခလေးများကိုလည်းစော်ကားသည့်
ထို့ နောက်သမ္မတကြီးကလူ့ အခွင့်အရေး၊ ‘လူသားအမြင်’
ထို့ ကြောင့်ပင်“ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုကျနော်တို့ ကစကားဆယ်ခွန်း
ဆယ့်ငါးခွန်းပြောတာထက် - ခင်ဗျားတို့ (ပြည်ပမီဒီယာ)က
ဥပမာ ဘီဘီစီ-အင်နာဂျုံးကိစ္စ)။ လက်တွေ့ တွင်ပြည်ပမီဒီယာ၏
တတ်ကြသည်မှာသဘာဝတရားကြီးဖြစ်နေသည်။ (ဥပမာထိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံ
လိမ်ညာဝါဒဖြန်လှုံ့ ဆော်နေကြသလိုပြသနာ၏လက်သည် တရားခံဖြစ်နေကြသည့် သဘောသက်ရောက်နေသည်။
ဂူတားရက်စ် (Antonio Guterres) ကိုပြောလိုက်သောအခါရခိုင်ပြည်သူတွေသမ္မတကြီးကို
ချီးကျူးကြ၊ နေအိမ်များရှေ့ တွင်ပြည်ထောင်စုအလံတွေထူကြဖြင့်-တကယ်လုပ်ပြနိုင်တာ
မပြနိုင်တာထား၊သဘောထားပြတ်ပြတ်သားသားရှိသော သမ္မတကြီးအစိုးရကို ထောက်ခံကြလေသည်။
သို့ ရာတွင်သမ္မတကြီးအစိုးရသည်ပြဿနာပိုကြီးထွားကျယ်ပြန့် မလာအောင်ထိမ်းချုပ်နိုင်
၄င်းတို့ မှာ - ပြည်ပကတောင်းဆိုနေသောသီးခြားလွပ်လပ်သောစုံစမ်းရေး
အဖွဲ့ ခွင့်ပြုပေးရေးကိစ္စ - ဒေသခံရခိုင်များကစီးပွားရေးအရမဆက်ဆံတော့သဖြင့်
ပုဂ္ဂိုလ် (၂၇) ဦးဖြင့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်သည်။ ရလဒ်ကိုသုံးလအတွင်းတင်ပြကြမည်ဟူ၍သိရသည်။
ထို့ ပြင်မည်မျှသမာသမတ်ကျသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့ စည်းသည်ဖြစ်စေ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သည်“ပြည်တွင်းဖြစ်” ဖြစ်နေသည်။
အစိုးရအပေါ်'သံသယမရှိအောင်’ဖွဲ့ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်အဖြစ်မှန် အချက်အလက်မှန်များကိုဖေါ်ထုတ်ရန်သည်ဒုတိယကိစ္စသာဖြစ်သည်။အမှန်တရား
ဖြင့်- အခုမှအစဖြစ်ကြောင်းဖြင့်လူသိများလာအောင် publicity လုပ်မည့်အချက်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပယ်ချခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ စင်စစ်အိုအိုင်စီ (OIC)၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တူရကီကလာကြည့်တာ၊ နောက်ထပ်လည်းအင်ဒိုနီးရှား
သို့ သော်သမ္မတကြီးအလေးထား၍ပြောသွားသည်များအနက်သူတို့ အား
ထောက်၍ဒီလူတွေဟာဒီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေလို့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တာပေါ့ဟုထောက်ပြလာနိုင်သည်။
ထို့ ကြောင့်သူတို့ ကိုပညာသင်ရေးမစမီသူတို့ တစ်ဦးချင်းစီ၏အဆင့်အတန်း (status)
(potential citizens)တွေလားကွဲကွဲပြားပြားအလျင်သတ်မှတ်ရှိထားသင့်ပါသည်။ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာကြောင်းထင်ရှားသူများကိုဘယ်လောက်ကြာကြာ
နေပြီးဖြစ်ပါစေပညာသင်ပေးစရာမလိုImmigration Detention Camps
သို့ ပို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေအတိုင်းပြတ်ပြတ်သားသားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်သာရှိသည်။
သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်လူစုခွဲသင့်သည်။သို့မှသာ လက်တွေ့ ပညာသင်ပေးဘို့ 
လွယ်ကူလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်၊
ကနေဒါ၊ သြစတျေးလျစသောmajor accepting countriesများတွင်ဝင်ခွင့်ရသူများကို
တိုင်းပြည်၏နေရာအနှံ့ အပြားတွင်ဖြန့် ၍ နေရာချထားသည်။ တနေရာတည်းစုမထား။
ဤသို့ နေရာချ ထားပေးပြီးမှ English asaSecond Language (ESL)ကိုသင်ကြားပေးသည်။
ထို့ ကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးကျမ္မာရေးကိစ္စများအတွက်ပြောစရာမရှိသော်လည်း ပညာသင်ကြားရေးကိစ္စကိုရှုဒေါင့်စုံမှအသေအချာတွက်ချက်ပြီးမှ စီစဉ်သင့်ပါသည်။
ဤသို့ မဟုတ်ဘဲ သူတို့ အားလုံးကိုသိုးနှင့်ဆိပ်မခွဲခြားဘဲပညာသင်ကြားရေးစတင်မည်ဆိုပါက
တမ်းနေတာ၊ဒေသခံများကိုအန္တရယ်ပြုနေတာဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်သူတို့ကိုအခြေခံပညာတော့သင်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆလျှင်လည်း
သမ္မတကြီးကြေငြာထားပြီးသားအချက်ဖြစ်သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မတိုင်မီကရောက်နှင့်နေ သူများ၏မြေးမျိုးဆက်ကိုလက်ခံမည်ဆိုသည့်အချက်အရလူအနည်းဆုံး ၂သိန်းလောက်
အချိန်ပြည့်အားသွန် ခွန်စိုက်(intensive education) သင်ပေး/သင်ယူကြမှဖြစ်မည်။
ထို့ ကြောင့်ဒေါ်လာတွေသန်းချီ၍ ကုန်မည့် ဤအစီအစဉ်ကိုကုလသမဂ္ဂ (UNESCO ?) လိုနေရာမှအကူအညီမပါပဲကိုယ့်အင်အားဖြင့်ကိုယ်လုပ်နိုင်ပါ့မလား-စဉ်းစားရပေမည်။
၍ဖြစ်နိုင်သည်။ဒါတောင်ရခိုင်ကျောင်းတွေကိုသူတို ကသွားတက်မှာမဟုတ်သလို ရခိုင်တွေကလည်းလက်ခံချင်မှာမဟုတ်။
ထို့ ကြောင့်သူတို့ ကိုပညာသင်ပေးမှဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ပြည်တွင်းနေမြန်မာမူဆလင်ကွန်မြူနီတီ
(တနိုင်ငံလုံးပျှမ်းမျှ တိုးနှုန်းသည် ၂.၂ % ဟုထင် ပါသည်)။ ထို့ ကြောင့်လူဦးရေများသော
မိသားစုများတွင်ကာယကံရှင်များကမိမိတို့ အသိဖြင့်မကန့် သတ်လျှင်
အစိုးရကဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်ကန့် သတ်ပေးဘို့ ဖြစ်သည်။ (Eugenic/ forced neutering)
ဘင်္ဂလီများမြန်မာနိုင်ငံထဲစိမ့်ဝင်လာခြင်းသည်တစ်ဘက်နိုင်ငံမှလူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှု၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံထည်းတွင်ဆက်လက်ပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်မခံနိုင်ပါ။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်မှု (national security threat) ဆိုနေသည်မှာ ဤအချက်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ဤသို့ ကိုင်တွယ်ရာ၌လူ့ အခွင့်အရေးစံတစ်ခုခုနှင့် ငြိ
ရခိုင်အရေးသည်မြန်မာအစိုးရသစ်၏နိုင်ငံရေးခွန်အား (political strength) ကိုပြည်တွင်းပြည်ပမျက်နှာစာနှစ်ခုစလုံးမှာစာမေးပွဲစစ်လိုသလိုဖြစ်ခဲ့သည်။
(Weimer Republic, 1919-1933) ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောအခြေအနေမျိုးနှင့်ဆင် ဆင်တူသောအနေအထားမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုဆိုချင်ပါသည်။
Copy From Forward Mail